Sadexdaan Waxyaabood Haku Dhihin Xaaskaaga Hadaad Rabtid In Guurkaaga Uusan Burburin - Aayaha
Home Editor's Picks Sadexdaan Waxyaabood Haku Dhihin Xaaskaaga Hadaad Rabtid In Guurkaaga Uusan Burburin
Shabakadda Aayaha Online, waxay idiin soo gudbineysaa 3 waxyaabood oo ay tahay in lamaantaada marnaba aadan ku dhihin.
Xaaskeygi hore sidaan ma ahayn
Waxaad adiga isku dayeysaa inaad wax u sharaxdid ama inaad wax jecleysiisid, balse inaad haweeney kale tusaale uga dhigtid xaaskaaga si ay ugu daysato ayaa qalad weyn ah oo aad ka gashay gabadha, marka iska jooji.
Maxaan kuugu sheega Meesha aan joojo ama u socdo
Tani waa xushmad darro tii ugu weyneyd dhab haddii laga hadlo.
Qof kasta xushmad ayuu istaahilaa, xiriirkana kasii daran, si kastaba ninka si isdaba jog ah ugu sheega xaaskiisa inaysan u qalmin inuu u sheego Meesha uu joogo ma xushmeeyo xaaskiisa mana qiimeeyo xiriirka waxaana wanaagsan inaad ka tagtid.
Sabab aadan u noqon Karin heblaayo oo kale
Inaad la meel dhigtid xaaskaaga haween kale wanaag ma keeneyso sababtoo ah xiriirka kaliya ayay burburineysaa.
Iska jooji, Waxaa macquul ah in lamaantaada aad u qaadatid inay si caadi ah hadalkaas ama haweenka kale ee aad la meel dhigtay u qaadatay balse taasi waxay dib ka keeneysaa muran xoogan oo aad xallin weyso.
Haddii aad rabtid haweeneydaada in haweenka aad la meel dhigeysid ay ka wanaagsanaato ama haddii ay wanaagsanyihiin la mid noqoto ammaan oo si wanaagsan wax ugu sheeg, ku amaan dadaalkeeda si ay u laba jibaarto, si xushmad leh u sheeg cilladaheeda adigoo aanan tusaale ugu soo qaadan haween kale, haddii kale hadaad haween kale tusaale ugu soo qadatid ogoow xiriirkaas waa burburayaa taladaasna ma qaadaneyso.
Previous articleWax Ka Ogoow Cudurka Howlgabka kacsiga!
Next article10 Waxyaabood Oo Haweeney Kasta Ay Ka Mudantahay Gacaliyaheeda Inuu Usameeyo
Aayaha editor - May 17, 2019 0
Guurarka ama xiriirada waa kuwo wajaha caqabado aanan dhammaad lahayn. Sida aad u xakameyso qabadahaas waa muhiim. Waa waajib saran labada lamaane inay xaqiijiyaan waxyaabah...
Astaamahan Hadaad Ninka Ku Aragto Wuu Iskala Kaa Joogaa Balse Naag...
Ninka ugu taajirsan Hindiya oo badbaadiyay walaalkiis oo ay cadaw isku...
Shirkad dooneysa in Kilkilaha haweenka u kireysato inay xayeysiin kusameysato (Daawo...
5 Waxyaabood oo Nin kasta oo jeeb maran ama Shiid ah...
Tuulo aroosyada loo joojiyay canshuur lagu soo rogay ragga guursanaya (LAYAABKA...
5 things to keep in mind when on the verge of...
Daawo: Mursal Muuse iyo Gacalisadiisa Hodan Cabdiraxmaan oo hees cusub soo...